I-Highlander Dinner Plain
I-Highlander iyindlu yomndeni efudumele futhi ekhangayo ebanzi enamagumbi okulala ayizindlovukazi ezi-3, igumbi eliphezulu kanye namagumbi okugeza angu-2. I-loft inemibhede eyisithupha eyodwa kanye ne-TV/Video/Games nook, elungele izingane kanye nabantu abadala ngokufanayo. Itholakala eduze kweDinner Plain Hotel nendawo yokulondoloza izihlahla enompheme onelanga ngemuva. Inekhishi elihlome ngokuphelele, i-microwave kanye nomshini wokuwasha izitsha.
Ilungele amaholide Ehlobo noma Asebusika. Indawo yokupaka izimoto eyanele yezimoto ezi-3. Akukho ukungena kwe-resort okudingekile. Osaqalayo ukuphakamisa i-ski kanye nokudlala kweqhwa kusebangeni lokuhamba ngezinyawo.
Indawo yokungena enegumbi lokomisa nelondolo elibanzi elisuka kwesokudla somnyango ongaphambili. Iphaseji eliholela endlini yokugezela. Eduze kwegumbi lokugezela kunendlu yangasese ehlukile. Indawo yokuhlala evulekile enepulani inendawo yokudlela evulekile enkulu enekhishi eligcwele kahle elinendawo yokudlela yasekuseni kanye nezihlalo. Indawo yokuhlala inendawo yomlilo evulekile amasofa anethezekile, i-LCD TV/DVD enosayizi omuhle.
Esitezi sokuqala kunamakamelo okulala ayi-3 anobukhulu obuvulekile ngalinye linombhede wendlovukazi. Igumbi ngalinye lokulala linama-rails ethawula ashisayo. Amakamelo amabili okulala akhelwe ngezingubo. Indawo yokugezela kanye nendlu yangasese ehlukene nayo ikhona kuleli zinga.
Isitezi sesibili sinesitezi esiphezulu, esihlalisa imibhede engu-4 ekugcineni kanye nemibhede emi-2 ngakolunye uhlangothi, ehlukaniswa indawo yezitebhisi. Kukhona indawo yokulala eseduze nendawo yokuma futhi phakathi kwezindawo zokulala efakwe amacushion athambile, umata opholile kanye ne-LCD TV/DVD, elungele izingane kanye nabantu abadala ngokufanayo.
I-Highlander itholakala enhliziyweni ye-Dinner Plain. I-Dinner Plain iyidolobhana elihlukile endaweni ekhululekile yase-Australia ngaphezu kweqhwa. Izindlu, amafulethi kanye nezindawo zokulala zibonisa ifa lezakhiwo zamaphayona okuqala e-Victorian Alpine High Country. Yakhiwe ngamatshe, izingodo nothayela futhi ivame ukuziqhayisa ngokubasa umlilo ngamatshe amahle, ngayinye ihlangana kahle nezinsini zeqhwa ezizungezile kanye nezwe lamathafa aphakeme. Idolobhana lase-Dinner Plain linezindawo zokudlela kanye nezindawo zokudlela eziningi ukwanelisa ukulamba kwakho, kanye nesipiliyoni sokudlela esikude eqhweni esinikezwa i-Alpine Nature Experience. Hamba emlilweni ovulekile e-High Plains Bar, Graze noma Dinner Plain Hotel, phakamisa izinyawo zakho futhi ujabulele, lonke ibanga lokuhamba ukusuka endaweni yakho yokuhlala. Ingabe uzizwa unamandla ngomoya omusha we-Alpine? Kuqhubekisele phambili futhi uzitike ngeminikelo kanokusho ye-Dinner Plain edalelwe ukubuyisela umzimba nengqondo. Nethezeka futhi ugcwalise umphefumulo wakho, cwilise emanzini afudumele e-Onsen Retreat + Spa noma eMountain Wellness.
Zonke izinsiza zitholakala enkabeni yedolobha futhi zihamba ibanga ukusuka noma yikuphi eDinner Plain.
I-Brandy Creek Supermarket etholakala ekuqaleni kwe-Big Muster Drive e-Dinner Plain ivuliwe phakathi nobusika kusukela ngempelasonto yosuku lokuzalwa luka-Queen kuze kube sekupheleni kuka-Septhemba. Avulwa ngo-9am -5pm nsuku zonke (kusukela ngo-8am ngoJulayi) futhi athengisa uhla oluncane lokudla nezidingo. Iqhutshwa yi-Foodworks e-Omeo ephinde ilethe ku-Dinner Plain unyaka wonke futhi ilethwe eqala ku-$8 kuphela ukuze ilethwe mahhala ngama-oda angaphezu kuka-$150.
Ezivakashini ezivakashela i-Dinner Plain ngaphandle kwesizini ephezulu, i-DP Grocer iphinde ibe yisevisi yonyaka wonke engaletha igrosa enekhwalithi ephezulu endaweni yakho yokuhlala elungele ukufika kwakho. Ama-oda kufanele afakwe kusenesikhathi.
Ukunakekelwa Kwasemini(ubusika kuphela)
IHotham Day Care itholakala eBig D, Indawo Yeqhwa Yezingane. Igunyazwe ukubhekelela izingane ezifika kwamashumi amathathu ezineminyaka ephakathi kwezinyanga ezintathu neminyaka emihlanu. IHotham Day Care idume ngokunakekelwa kwayo okukhethekile nochwepheshe, ihlinzeka ngabasebenzi abaqeqeshiwe nabanolwazi abalwela ukuhlangabezana nezidingo zomntwana ngamunye. I-Hotham Day Care inikeza amagumbi okudlala amathathu agcwele ubumnandi kanye ne-rom yomndeni ehlukile yomama abancelisa ibele. Imininingwane yokuxhumana ph:5759 3074.
Izinja zamukelwa eDinner Plain, nakuba imvume idingeka. Lokhu kungahlelwa ne-Alpine Shire. Vakashela iwebhusayithi ye-alpine shire.
I-Snow Monkey ibhizinisi lase-Australia eliphethwe umndeni elinezitolo e-Mt Hotham nase-Smith St, e-Collingwood. Banohlu olukhulu lwegiya lokushushuluza nelokugibela kanye nohlobo olusha olukhulu oluseduze lwegiya le-XC kanye negiya lasemuva. Iya kuwebhusayithi yeVictoria's High Country ukuze uthole ulwazi olwengeziwe.
I-Hoys Ski Hire e-Castrans Corner e-Dinner Plain izokwazi ukusiza ngokushwiba eqhweni, ukushushuluza eqhweni, ukushibilika eqhweni kanye nokuqasha ngendlela engafanele. Thintana: 5159 9339
Sicela uhlole ukuthi izimoto azipakiwe yini emigwaqeni ngenxa yemisebenzi yokucwenga iqhwa. Indawo yokupaka ebusuku iyatholakala mahhala futhi inemvume engahle ihlelwe ngomhlinzeki wakho wokulalisa. Abasebenzi bendawo bahlanza imigwaqo njalo
I-Telstra ne-Optus inikeza isevisi yeselula kulo lonke idolobhana. I-Vodafone ayinikezeli ngefoni.
Ngaphandle kweDinner Plain, Isitolo esijwayelekile saseGenny eMount Hotham sinikeza uchungechunge lwezidingo. Kungenjalo, labo abashayela bedabula idolobha lase-Bright bangagcina e-Woolworths noma e-IGA lapho bekhuphuka intaba. Nambitha iwayini labo lesifunda lendawo kanye nezithako zesizini, noma ugoqe phambi komlilo ovulekile endaweni yokucima ukoma.
I-Dinner Plain itholakala ku-11km ukusuka eMt Hotham. I-Hotham iyidolobhana eliphakeme kunawo wonke e-Australia eliyindawo yokungcebeleka unyaka wonke, ngakho-ke isikhathi sasebusika sisho ukuthi yonke imisebenzi oyithandayo esekelwe eqhweni iyatholakala futhi nelanga lasehlobo likhipha izindawo ezinhle kakhulu nezindlela eziningi zokuhamba izintaba, ukugibela ibhayisekili kanye nokugijima kwemizila - ngakho-ke kuhlale kukhona i-adventure entsha ezoba khona.